I-China clear and amber grade A Volumetric Flask With ground – in glass stopper or plastic stopper Ukwakha kanye nefektri | U-Huida
Sula futhi amber grade A Volumetric Flask With ground – in glass stopper or plastic stopper
Igama lomkhiqizo: Volumetric Flask
1. Isigaba A
2. Ngesivalo sengilazi esingaphansi komhlaba noma sesivalo sepulasitiki
Umbala: Sula futhi amber
Isingeniso Se-Flask Volumetric
Igabha lomthamo (iflask yokulinganisa noma iflaskhi ethwelwe iziqu) ucezu lwengilazi ye-laboratory, uhlobo lwebhodlela laselebhu, elinganiselwe ukuqukatha ivolumu eqondile ezingeni lokushisa elithile. Amabhodlela weVolumetric asetshenziselwa ukuxubana okunembile nokulungiswa kwezixazululo ezijwayelekile.
Mayelana ne-Volumetric Flask
I-Volumetric Flask grade A., Ngesivalo sengilazi esingaphansi komhlaba noma isitobha sepulasitiki, sicace
IVolumetric Flask amber, grade A, With ground – in glass stopper or plastic stopper
Ngaphambi kokusebenzisa ibhodlela levolumu, kudingeka amasheke amabili alandelayo.
1. Umthamo webhokisi lomthamo uhambelana nalokho okudingekayo.
2. Bheka ukuthi ukhokho uqinile futhi awuvuza yini.
Beka amanzi ebhodleleni eduze nolayini wokumaka, xhuma istobha ngokuqinile, bese usivumela sime imizuzu emibili. Hlola nephepha lokuhlunga elomile eceleni komthungo webhodlela ukuze ubone ukuthi akukho ukuvuza kwamanzi. Uma ingavuzi, vula ipulagi engu-180 °, uyivale ngokuqinile, uyihlanekezele, bese uvivinya ukuvuza kule ndlela. Isitobha esiqinile kufanele sigcinwe endaweni ephephile. Kunconywa ukubopha intambo entanyeni yebhodlela ukuyivimba ukuthi ingawi noma ixutshwe nezinye izitobha.
Langaphambilini Ipayipi Lokulinganisa Lekilasi A Lithweswe iziqu ngo-zero phezulu
Olandelayo: lab glassware Volumetric Pipette enophawu olulodwa
Eshibhile Lab Glassware Borosilicate Sula Glass Kr ...
Ipayipi Lokulinganisa Lwekilasi A Elithweswe Iziqu nge-zero a ...
Ukulahla i-Bottle Amber noma ingilazi ecacile nge-groun ...
IStopper esivamile esingenalutho umlomo womhlabathi ojwayelekile
Ilabhoratri noma ukufundisa i-Alcohol lamp mini alcoho ...
Isihlungi sefaneli (ifanele ye-Buchner), ene-disc eyakhiwe